Red Candles Candles
Tupu ị na-enwu kandụl gị na-acha uhie uhie iji kpee ekpere, ọ bara uru ịhọrọ ebe na oge ị ga-eji kpee ekpere n’enweghị ndọpụ uche. Can nwere ike itinye uche gị n’ekpere nye Chineke, Uriel, na ndị mmụọ ozi ọkụ ọkụ ọkụ ndị ọzọ na-achọ amamihe ịchọrọ maka ọrụ. Kpee ekpere ka ị nwee ike ịchọpụta, zụlite na ...
Ka anyị na-eweta ọkụ n’ọkụ kandụl a, na-eme ka ọ na-enwu n’ọkụ, ka anyị weta ọkụ n’ọkụ n’oge a na-efe ofufe ma na-efe ofufe. ka ìhè ndị a mara anyị gburugburu na ndị anyị hụrụ n'anya. Anyị na-enye gị…
Adị m obere kandụl apụl, na-abịa site na Hebei Seawell I / E Co., Ltd. Snow, yi onyinye Santa Claus na-acha ọbara ọbara nke nwere nrọ na ọ joyụ nke creep. Tonal na-acha ọbara ọbara na nke ọcha, oriọna nke ekeresimesi na-egbu maramara, mee ka mmadụ nwee mmetụta pụrụ iche nke ihunanya na ụtọ, bụ akara nke udo na obi ụtọ; Wepụ ngwaa na-acha ọbara ọbara ...
Santa Claus Osisi Candles
N'ebe ọdịda anyanwụ, ma ọ bụ Onye Kraịst, ekeresimesi osisi iji mepụta ọ joyụ nke ikuku ememme. A na-eme osisi Krismas n'ozuzu ya, osisi osisi fir na-acha odo odo nke China dị ka akara nke ndụ ebighi ebi. Osisi eji oriọna dị iche iche chọọ mma, chọọ ya mma, re…
Fada Santa Claus
Santa Claus a raara nye ezigbo ụmụ na ekeresimesi Eve na-egosi ọnụọgụ dị omimi. Legend kwa abalị na Disemba 24, nwoke dị omimi ga-eji 12 dị nwayọ dọrọ site na reindeer, jiri ọnụ ụzọ si na chụpụrụ banye n'ụlọ, wee tinye nzuzo na ụmụ ha n'ihe ndina…
Candles ụbọchị ọmụmụ
Na Gris oge ochie, ndị mmadụ na-efe chi ọnwa Atemis. N’meme ncheta ọmụmụ ya nke afọ a, Ndị mmadụ na-achọ itinye ebe ịchụ aja maka achịcha mmanụ a andụ na ọtụtụ na -eme ka ikuku dị ọcha, iji gosipụta ekele ha nwere maka chi ọnwa. Mgbe e mechara, jiri akụkụ Akwụkwọ Nsọ…
N'otu oge, nna ukwu na-akwaga n'ụlọ ọhụrụ. Zụtara ọtụtụ ọkụ na kandụl. Nna-ukwu chere na oriọna amachaghị, agbanyeghị, mgbe ahụ nna ukwu ahụ nwere oriọna n'ime ụlọ, tinye kandụl na obere akụkụ. Ìhè hụrụ onwe ya onye nwe ihe mgbu, ya mere, ọ dị kandụl: “kandụl na kandụl, yo ...
beeswax votive kandụl, kandụl taper kandụl, kandụl votive, kandụl taper, kandụl beeswax, kandụl ogidi beeswax,